သတင်း - CHINAPLAS 2021—ချန်ပီယံ EXTRUSION မှကြိုဆိုပါတယ်
တရုတ်နိုင်ငံရှိ 34 ကြိမ်မြောက် ပလတ်စတစ်နှင့် ရော်ဘာစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ပြပွဲတွင် Shenzhen World Exhibition & Convention Center မှ သင်နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ Zhejiang CHAMPION Plastic Machinery Co., Ltd. သည် ပြပွဲကို ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့မှ တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့အထိ။ ၂၀၂၁။
Shenzhen ရှိ CHAMPION သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ငါတို့ဒီမှာ။
ခုံနံပါတ်- Hall 7၊ J11
Shenzhen World Exhibition & Convention Center၊ CHINA
CHAMPION သည် သင့်အတွက် CHD85 twin screw extruder နှင့် three-roller calender ၏ မော်ဒယ်အသစ်ကို သင့်အား ပြသပါမည်။ PET စာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း.
CHD85 extruder မော်ဒယ်အသစ်သည် မတူညီသော PET ပစ္စည်း၊ အပျိုစင်ပစ္စည်း၊ ပုံမှန်ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်း၊ APET/PETG/CPET/RPET အားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အားကောင်းသော ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ Max. စွမ်းရည်သည် တစ်နာရီလျှင် 800 ကီလိုဂရမ်ကျော်ရှိသည်။ Champion သည် မတူညီသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဝက်အူနှစ်လုံး extruder အမျိုးမျိုးကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်နာရီလျှင် 250 ကီလိုဂရမ်မှ 1200 ကီလိုဂရမ်အထိ ထွက်ရှိနိုင်သည်။
တူညီသောအမြွှာဝက်အူ extruder ကို PLA၊ PP၊ PS၊ PE၊ ABS၊ အခြားပလပ်စတစ်အစေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ HIPS၊ PMMA၊ PC၊ GPPSစသည်ဖြင့်၊ တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ အမျိုးအစားအသစ် twin screw extruder သည် output စွမ်းရည်ပိုမိုရှိသည်။ အများအားဖြင့် ဝက်အူနှစ်လုံးထုတ်သည့်စက်အတွက် အခြောက်ခံရန်မလိုအပ်ဘဲ ပါဝါပိုသက်သာသည်။
ဤပြက္ခဒိန်၊ ဒလိမ့်တုံးအနံ 1200 မီလီမီတာ၊ SIEMENS servo ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ မာကျောသောမှန်မျက်နှာပြင် ရိုလာတုံး၊ ဘေးကင်းရေး အကာအကွယ်ကိရိယာ စသည်ဖြင့်၊ မတူညီသောစာရွက်ထုတ်ကုန်အတွက်၊ ပြက္ခဒိန်ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်း ကွဲပြားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဒေါင်လိုက်အမျိုးအစားပြက္ခဒိန်၊ 45° အမျိုးအစား၊ L အမျိုးအစားနှင့် အလျားလိုက်အမျိုးအစားတို့ ရှိသည်။ Roller သည် မတူညီသော စာရွက်ထုတ်ကုန်များအလိုက် ကွဲပြားသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူသည် ထိပ်တန်းအဆင့်မီ ပလတ်စတစ်စာရွက်/ပန်းကန်ပြားထုတ်စက်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Champion သည် သင်၏မိတ်ဖက်ကောင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များ၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးသည် သင့်စျေးကွက်ကိုချဲ့ထွင်ရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။
Champion booth သို့လာရောက်ပြီး ပလပ်စတစ်စာရွက်စက်နည်းပညာအသစ်များကို ရယူလိုက်ပါ။ ငါတို့က မင်းကို ဒီမှာစောင့်နေတယ်။
ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 11-2021